इन्टरनेट Achives· Page2of 22
‘कोरोनाको संकटभर निःशुल्क इन्टरेट देऊ सरकार’
काठमाडौं । कोरोना संकट अवधिभरि नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेल मार्फत डाटा निशुल्क गरेर आम नेपाली नागरिकलाई निर्बाध इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्दछ। यसले गर्दा घर बसेर पढ्नेले पढ्न पाउँछन्, सामाग्री डाउनलोड गर्न पाउँछन् र केही समस्या भएमा सहकार्यकै लागि पनि सञ्चार निशुल्क …
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले इन्टरनेट, मोबाइल लगायतका विद्युतिय कारोबार, कुनै पनि बैंकको एटिएम, र कनेक्ट आइपीएस सेवा निःशुल्क गरेका छन् । बाणिज्य बैकहरुका सिइओहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन र वित्त कम्पनी संघले संयुक्त रुपमा यस्तो सुबिधा घोषणा गरेका …
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले विभिन्न सेवाहरूको बन्डलिङसहित नयाँ स्टार्टर प्याक ‘सही यो ! पावर सिम’ ल्याएको घोषणा गरेको छ । यो सिममार्फत ग्राहकले अझ सुलभ दरमा सेवाहरू लिन सक्नेछन् । पीआरबीटी, स्पोर्टिज, स्पोर्ट भिडियो पोर्टल, दामी म्युजिक र हङ्गामा म्युजिक प्रो निःशुल्क …
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल स्याङ्बोचेमा जीएसएम फोरजी मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएको छ । समुद्री सतहदेखि ३ हजार ८ सय ८६ मिटरको उचाइमा रहेको स्याङ्बोचेमा फागुनको अन्तिम सातादेखि कम्पनीले फोरजी सेवाको शुरुवात गरेको हो । विश्वकै सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा आरोहणका …
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको १०३ वडामध्ये अधिकांशमा इन्टरनेटको लाइन जडान गरिएको छैन । जडान गरिएका वडामा पनि राउटर मात्रै छन्, इन्टरनेट सेवा चल्दैन । यसैगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि इन्टरनेट सेवा छैन । जिल्ला सदरमुकाम चौतारा र आसपासका अधिकांश विद्यालयमा …
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले जिएसएम मोबाइल सेवाको प्रणाली अध्यावधि गरी डाटा सेवालाई प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ । कम्पनीले नयाँ पिसिआरएफ प्रणाली जडान गरी पुराना ग्राहकलाई स्तरोन्नति गरिएको प्रणालीमा माइग्रेट गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको बताएको छ । डाटा सेवाका लागि विगतदेखि सञ्चालन गरिरहेको ‘पिसिआरएफ’ …
काठमाडौं । एनसेलका सबै मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले अब बढि शुल्क लाग्ने कुनै डर बिना ढुक्कसँग मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डेटा सेवाको फाइदालिन सक्नेछन् । एनसेलप्राईभेट लिमिटेडले नयाँ डेटा बोनस योजना सार्वजनिक गरेको छ, जस अन्तर्गत मेन ब्यालेन्स अर्थात पे एज यु गोबाट चलाउँदा …
एनसेलको ‘रिचार्जमा चमत्कार’योजनाका विजेताहरु पुरस्कृत
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो ‘रिचार्जमा चमत्कार’ योजनाअन्तर्गत बिहीबार मासिक र साप्ताहिक विजेता ग्राहकहरुलाई नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । ईलामकी गंगा माया राई र रुपन्देहीका टीकाराम बलाल मगरले भाग्यशाली ग्राकह बन्दै जनही रु १० लाख जितेका छन् । आफ्नो कष्टमर लोयल्टी …
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि भन्दै विभिन्न दरका अनलिमिटेड भ्वाइस र डाटा प्याक उपलब्ध गराइरहेको छ । पछिल्लो समयमा आफूहरुले उपलब्ध गराइरहेका यस्ता प्याकहरु निकै नै लोकप्रिय रहेका कम्पनीको दावी रहेको छ । सस्तो मूल्यमा असीमित अर्थात कम्पनीकै नेटवर्कमा जति पनि …
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले माइक्रोसफ्टको कम्युनिकेसन सोलुसन्स् अन्तर्गतका क्लाउड सर्भिस र अनलाइन मिटिङ् टुल लगायतका सेवाहरु नेपाली कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराउन माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनसँग सहकार्य गरेको छ । गत हप्ता आयोजित एक कार्यक्रममा विभिन्न बंैक, व्यवसायीक घराना, एनजिओ, आईएनजिओका २५० भन्दा बढि प्रतिनिधी तथा …
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी अनलाइन् शपिङ्ग गन्तव्य, दराजले सामसङ नेपालसँग मिली फेब्रुअरी १२ मा सामसङ ग्यालक्सी नोट १० लाइटको ‘लन्च’गर्ने भएको छ । यस प्रीमियम फीचर फोनको मूल्य यूरोपियन बजारमा ६२७ यूरो (रु. ७८,३००)रहेको छ । उक्त फोन ‘औरा ब्ल्याक’ र ‘और ग्ला’ …
सरकारले विना कारण लाइसेन्स रोक्ने र ‘सिजी टेल’बारे भ्रम सिर्जना गर्योः निर्वाण चौधरी
काठमाडौं। चौधरी ग्रुपले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि आफूहरुलाई दूरसञ्चार सेवाका लागि युनिफाइड लाइसेन्स दिनुको साट्टा सरकारले भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गको सिजी टेलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरु सबै प्रक्रिया पूरा गरी तयारी अवस्थामा बस्दासमेत …